Vidio ny Embeds YouTube - YTpals
Backlink tsara kalitao avy amin'ny Blog Embeds
Laharana fikarohana YouTube avo kokoa (SEO)
Popularity sy fahefana ambony amin'ny horonan-tsary
Vokatra maharitra, maharitra
Ny horonan-tsarinao dia tsy maintsy alefa
Vidio ny YouTube Embeds hanatsara ny valin'ny fikarohana sy fifamoivoizana ataon'ny horonan-tsary.
Ny isa sy ny kalitaon'ny zana-kazo no zava-dehibe indrindra amin'ny laharana YouTube.
Manisa ny vidéo ny YouTube manoloana ny lazan'ny horonantsary sy ny fahefany!
Arakaraka ny maha avo ny lazan'ny horonan-tsarinao sy ny fahefanao no hametrahan'ny YouTube avo kokoa azy io ary arakaraka ny anehoan'izy ireo izany eo imason'ny olona hafa mijery horonantsary ao amin'ny YouTube.
Manontany tena ianao hoe ahoana no fiasan'ity serivisy ity?
Rehefa manafatra ity serivisy ity ianao dia handefa horonan-tsary tianao ampidirinay amina tranonkala hafa.
Mandritra ny andro maromaro, hampiditra ny horonan-tsarinao amin'ny tranokala tsy miankina an-jatony 2.0 izahay hahafahanao mahazo antoka fa miharihary bebe kokoa ny horonan-tsarinao. Ho hitan'i Google tafiditra ao anatin'ireny tranonkala rehetra ireny ny horonan-tsarinao ary hoheveriny avy hatrany ho malaza kokoa ny horonan-tsarinao ary noho izany dia manana fahefana avo kokoa ianao.
Ity laza sy fahefana ambony ity dia mitarika ny YouTube hanisy toerana ambony kokoa ny horonan-tsarinao amin'ny valin'ny karoka ary hampiseho azy io matetika kokoa mandritra ny tranonkalany amin'ireo olona hafa mijery horonantsary YouTube.
Inona no ampidirina ao amin'ny YouTube?
Efa nitsidika tranokala na bilaogy iray izay nisy horonantsary YouTube naseho teo ve ianao? Mampiditra izany!
Raha manana fampidirana tafiditra ao anaty horonantsary ianao (azo atao afa ity) dia afaka mametraka ao anaty tranokalany na ao anaty ny mombamomba ny media sosialy ny tsirairay.
Rehefa mitranga izany dia tsara izany! Mahazo fampiroboroboana horonantsary maimaimpoana ianao.
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny embeds YouTube?
Aorian'ny nametrahanao ny kaontinao dia horaisinay ny horonan-tsary efa natolotro ary manomboka ampidirina amina tranonkala mifandraika amin'ny akany.
Manomboka miasa amin'ny baiko vaovao izahay ao anatin'ny 24-72 ora aorian'ny nametrahana azy ireo. Avy eo, afaka herinandro hafa vao vita ny fandefasana.
Inona no mitranga aorian'ny nametrahako ny baiko?
Ity serivisy ity irery ve no hahomby amin'ny lahatsariko?
Eny ary tsia. Ity serivisy ity dia hanampy amin'ny fampitomboana ny laharam-pahamehan'ny YouTube sy ny fivezivezena ara-nofo, fa ny tena fahombiazana dia tonga amin'ny lafin-javatra isan-karazany ary izany dia 1 amin'ireo anton-javatra ireo.
Zavatra hafa hanatsarana ny fahombiazan'ny horonan-tsary misy anao:
YouTube Video SEO - zava-dehibe indrindra ny fanatsarana ny lohatenin'ny horonantsary, ny famaritana, ny mari-pamantarana anao. Soa ihany fa manolotra an'ity serivisy ity izahay! YouTube SEO
Manatsara ny fantsonao - efa voamarikao ve fa manana fantsona hafa tanteraka amin'izy ireo avy hatrany ireo fantsona miaraka amin'ireo mpangataka 1M + rehefa mitsidika anao ianao? Satria izy ireo dia nanatsara ny zava-drehetra momba ny fantson'izy ireo mba ho matihanina araka izay tratra. Tsy manandrana manainga ny serivisinay izahay, fa manolotra serivisy fanombanana fantsona feno izay tena mampino ary ilaina raha maniry fahombiazan'ny YouTube tena izy ianao. Fanombanana ny Channel YouTube
Banner Channel avo lenta sy Thumbnail horonantsary - Manolotra an'ity serivisy ity izahay. Famolavolana sary an-tsary YouTube
Votoatiny tsara (mazava ho azy)
Jereo izay lazain'ny mpanjifantsika rehefa mividy ny Embeds YouTube izy ireo